N’Izrel oge ochie na ná mba ndị gbara ya gburugburu, a na-eji ajị atụrụ, ajị ewu na ajị kamel emepụta ákwà. Ma, nke a kacha eji emepụta ákwà n’oge ahụ bụ ajị atụrụ. N’ọtụtụ ebe na Baịbụl, e kwuru gbasara atụrụ, ịkpacha ajị, nakwa uwe e ji ajị mee. (1 Samuel 25:2; 2 Ndị Eze 3:4; Job 31:20) Ahịhịa e ji emepụta ákwà linin dị n’Ijipt nakwa n’Izrel. (Jenesis 41:42; Jọshụa 2:6) Ọ ga-abụ na ndị Izrel anaghị akọ ogho. Ma, Baịbụl kwuru na ndị Peshia na-eji ogho eme ihe dị iche iche. (Esta 1:6) Ákwà silk ­na-ada oké ọnụ, o yikwara ka ọ̀ bụ naanị ndị ahịa sí Eshia na-ere ya.—Mkpughe 18:11, 12.